Miasa Toy ny Uber ny Fampiasa Rosiana Vaovao, Fa Natao Ho Amin’ny Fandevenana Ihany Izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2017 4:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Ελληνικά, Français, English
Manana ny ilaina rehetra sy ny fahavitrihana ara-teknika toy ny tambajotra-pitaterana Uber izy, kanefa kosa manampy anao amin'ny fandaminana ny fandevenana, fa tsy amin'ny fitaingenam-piara. Namolavola ny fampiasa antsoina hoe “Umer” ( “Maty” amin'ny teny Rosiana) ny mpitantana tetikasa iray miasa ao amin'ny Aterineto Rosiana goavam-be Yandex , tolotra iray naorina hanampiana ny olona hiala amin'ny olana ara-pitaovana rehefa hametraka ny fianakaviana any amin'ny toeram-pialan-tsasatra mandrakizay.
“Toa tahaka ny mandeha ho azy ny zava-drehetra ho antsika, afa-tsy ny fahafatesana. Tiako ny handamina izany”, hoy i Geranin nanoratra tao amin'ny Facebook.
“Samy manana ny sarany manokana ny fandevenana tsirairay,” hoy izy tamin'ny tranonkala TJournal. “Diso tahaka ny manontany hoe ‘Ohatrinona ny fiara?’ ny manontany hoe ‘Ohatrinona ny fandevenana?” hoy izy nanampy. Nilaza ihany koa i Mokhov fa tsy voafaritry ny lalàna ny tsenam-pandevenana ao Rosia ka mahatonga ny sarambidy fanampiny isan-karazany ho sarom-pantarina mialoha.
Na dia mbola aloha loatra aza ny hamantarana ny fomba hivoahan'ny Umer amin'ny tsenan'ny fampiasa, dia marina ny filazan'i Mokhov mikasika ny fikorontanan'ny fandevenana ao Rosia. Tamin'ny Taombaovao teo, nandevina ny sisa tamin'ireo olona maty mihoatra ny 100 izay novonoin'ny tafika Rosiana roapolo taona lasa izay ireo manampahefana ao Chechnya . Tsy fantatra ireo niharam-boina ary natsipy tanaty fasana faobe ny sisa tavela tamin'izy ireo .